Bisy tsara - Pejy fandokoana fiara - Pejy fandokoana maimaim-poana
Bisy - boky fandokoana fiara
Ny ankizy dia mifanerasera amin'ny karazan-fiara rehetra amin'ny mbola kely. Ankoatra ny fanananao fiara ao amin'ny fianakaviana dia misy ihany koa ireo fiara fitateram-bisy isan-karazany amin'ny dingana tena mbola kely.
Pejy fandefasana bisy
Antony ampy ahafahanay manolotra ny sokajy misy anay miaraka amin'ny sary hosodoko bisy. Mizaha amin'ny alàlan'ny fanangonana sary fandokoana bisy maimaim-poana. Ny fanindriana ny sary dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny maodely fandokoana tsirairay avy: ​
Mpamily bus / bus
Sekolin'ny pejy fandokoana miaraka amin'ny bus bus